I-Coy Waterfront Log Cottage-Rustic Luxury! - I-Airbnb
I-Coy Waterfront Log Cottage-Rustic Luxury!
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguJay & April
UJay & April yi-Superhost
Yonwabele le ndlu yelog ihlaziywe ngokupheleleyo kwichibi elingekho nzulu leLake Nipissing. Yonke into entsha! Umhombiso onencasa kuyo yonke indawo enendawo yomlilo entle, zonke iibhedi ezintsha zodidi oluphezulu ezineeduvethi, izixhobo zombane, iiTV kunye ne-wifi, njl.njl. Ifumaneka ekupheleni kwendawo yokufa, uya kuyixabisa imithi eqolileyo ebonelela ngabucala, kunye nendawo ezolileyo. Ngaphandle yidekhi enkulu entsha yokonwabisa. Indawo egqibeleleyo yokuhlala kwindawo yakho yabucala, okanye ukukhwela isikhephe, ukuloba / ukuloba emkhenkceni okanye ikhefu losapho oluhamba ngekhephu!
Kukho idokhi ekhoyo ukuze isetyenziswe. Indlu yokucoca iintlanzi kufutshane nedokhi ukuze kugcinwe iincukuthu kude. Igaraji eshushu yokuhlangana emva kokuloba komkhenkce/ukuhamba ngekhephu. Ivenkile ngokubanzi imizuzu emi-5 yokuqhuba kunye nemizuzu eyi-10 yokuqhuba ukuya kwiinkonzo zaseCallander. Amanzi kukungena kwisanti enzulu.
Ifumaneka kuphela imizuzu eli-10 ukusuka kwi-Hwy 11 ephambili-iindlela ezigangathiweyo yonke indlela eya kwindlu encinci. ICallander (imizuzu eli-10 kude) ine-Foodland elungileyo yokutya, okanye iNorth bay yimizuzu engama-20 kuphela yokuqhuba. I-Marina ikumacala omabini kunye ne-10 min kude. Umkhondo we-snowmobile ye-OFSC yimizuzwana engama-30 ngaphandle echibini.
Umbuki zindwendwe ngu- Jay & April
Nceda uzive ukhululekile ukufikelela kum, Jay, ngetekisi okanye umnxeba 519-719-2639. Umfazi wam u-Epreli ukwafumaneka ngetekisi okanye umnxeba 519-630-6361. Siyavuya ukuphendula nayiphi na imibuzo onokuba unayo.